☃️ Winter Welcome Promotion !!! ☃️ - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
December 3, 2019 | by Eliza Skin Republic
❄️ Snap & Gain Discount 15% OFF to 100% OFF ❄️
December ရောက်ပြီနော်။ Christmas မှာ ဘာတွေလုပ်မယ်စိတ်ကူးထားကြလဲ?
Eliza မှာကတော့ အားလုံးအတွက် Santa ကပေးတဲ့ Christmas လက်ဆောင်လေးတွေက Chriatmas Tree အပြည့်ကိုရောက်နေပြီနော်။ December 1 ရက်နေ့မှ 31 ရက်နေ့အထိ Eliza ဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့ Christmas Tree တွေမှာ 15% OFF ကနေ 100% OFF အထိ Discount လက်ဆောင်တွေရှိနေတာဆိုတော့ Christmas Tree နဲ့ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ရင်း Discount လေးတွေရယူလိုက်တော့နော်။
Discount % လေးတွေကိုတော့ Christmas Tree မှာရှိတဲ့ Gift Box လေးတွေထဲမှာ ထည့်ထားမှာဖြစ်လို့ Complete Facial Treatment တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်တိုင်း Gift Box လေးတစ်ခုကိုရွေးခြယ်ရယူနိုင်မှာပါနော်။ ရွေးခြယ်ပြီး မိမိရရှိတဲ့ Discount % ကို Cashier မှာပြပေးပြီး Discount ကို Enjoy လုပ်နိုင်ပါတယ်နော်။ ဒီ Gift Box လေးတွေထဲမှာက 15% OFF ဆိုတော့ Complete Facial Treatment လုပ်တိုင်း 15% က သေချာနေပါပြီနော်။ အရမ်းအရမ်းကံကောင်းတဲ့ Discount 100% ပိုင်ရှင်တွေက ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်း သိချင်နေပြီမို့ရင်ခုန်နေပါပြီနော်။
Promotion ကိုရယူဖို့အတွက် စည်းကမ်းချက်လေးတွေကတော့
1. Christmas သစ်ပင် နဲ့ အလှဆုံးဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။
2. ပုံကို ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Wall ပေါ်မှာ Christmas ဒါမှမဟုတ် New Year နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်စာသားလေးနဲ့အတူ Public နဲ့တင်ပြီး Eliza ကို Check in လုပ်ပေးပါ။
3. နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်မှာ သတင်းကောင်းတွေရှိတိုင်း အမြဲအရင်ဆုံးသိစေချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို Tag လုပ်ပေးပါနော်။
ဒီစည်းကမ်းချက် ၃ ခုလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ Snap & Gain Discount ဆိုတဲ့အတိုင်း Complete Facial Treatment အတွက် 15% OFF ကနေ 100% OFF အထိ Discount လက်ဆောင်လေးတွေကံစမ်းရယူနိုင်ပါပြီနော်။ နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းလေးတွေသိရအောင်လည်း Page လေးကို See First လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
Hotline – 09 427666343